Dhibaatooyinka Goobta Iphone Waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo dayactir 2
Helitaanka iPhone ah sida xaqiiqada ah oo ku baaqay in dabaal! Laakiin waxa haddii aad halmaansan ku saabsan saldhig oo qalab cusub in qof kasta oo casriga ah ugu xeel dheer oo sina loogu? Bilowga ah waxay leeyihiin waqti adag is ogyahay ay qalab iyo muuqaalada waxa ku jira, laakiin ma aha kala duwan ee halyeeyada labada. In kastoo dhibaatada ku kala duwan yihiin laga yaabo in kiis walba Weli wax keliya ayaa waxaa common- xaqiiqda ah in aad iPhone uu idin siinayo waqti adag. Haddii aad leedahay 3GS iPhone ama iPhone 6 ama 6 Plus, waxa aanu rumaysanahay in aad xaq u leedahay in ay ku raaxaystaan ​​waayo-aragnimo ah ee iyagoo og waxyaalo yaab ah in aad telefoonka ku siin karaan. Laakiin aan dhammaan. Sida ugu dhaqsaha badan aad u ogaato oo ku saabsan qaababka rakibay qalab aad, aad u hesho fikrad ah iyaga qamaar haddii wax qaldamaan.
Goobaha aasaasiga ah in bilowga ah ogaan kartaa
Iyadoo dhererka waqtiga, iPhone ayaa si joogto ah laftiisa la casriyeeyay. Waa nooc kasta oo soo socota ay ka horreeyay oo ay ku raran gobolka-of-the-tahay sifooyinka si kastaba ha ahaatee in, sii beddelo guud ahaan lagu daydo ah.
• telefoonka App
Your iPhone aan shaki ku jirin hanad ah multitasking laakiin ka dibna mar kale waxa hoos si noqoshada 'Phone' in meesha ugu horeysa. Tubada Phone ee App aad screen guriga ee geeska bidix ee hoose. Marka aad halkaas gaaraan, fursado dhowr ah been adigu u talin. Tusaale ahaan, ikhtiyaarka Xiriirada waxaa loogu tala galay si aad u doorato ah buug cinwaanka xiriirka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira trick ah halkan. Waxaad ka heli kartaa oo kaliya kuwa fursadaha in lagu daray aad hore. Haddii ay dhacdo in ka badan qaar ka mid ah ku daray, ka jaftaa calaamad + iyo waxaa ka mid ah kuwa aad doorato. Laakiin ha iloobin in tuubada 'qabtay' mar ka badan tahay.
• farriinta codka Visual
Maxay noqon karaan waxa ka khayr badan qaadan in ay u arkaan doorasho farriinta codka ee app Phone ah? Wixii bilowga ah, siyoodba muuqaal ah 'farriinta codka' tab ee app ayaa kaa caawin kara mid aad u bilowdo. Mid ka mid ah wax aad u baahan tahay in fiira gaar ah waa lambar PIN farriinta ah in halkaan looga baahan yahay. Soo tago arkaya voicemails gaar ka ah tiro kale oo dhowr ah, aad Radidiyaha kartaa fariimaha ka sii yar.
• Video Call la Facetime
Habkaani ganaax ka shaqeeya ilaa aad soo wacdo qaar ka mid ah iPhone user kaliya. Muuqaalka in ka dhigan tahay wax xukumayaan Inay khiyaar kale wac, waxa kaliya ee aad hesho si aad u aragto ah Facetime icon yar ee qaybta bartamaha ee safka ugu hooseysa. Oo waxaad ogaan waxa waxa ugu fiican yahay? Tubada oo ka heli wejigaaga arbushin ilaa shaashadda. Sidaas marka qofka dhinaca kale ka helo yeedho, waa waayo aragnimo video chat weyn!
Goobaha faa'iido leh in halyeeyada qabto degto ee
Sidaas daraadeed waxaad u malayseen bilowga ah waxay dareemaan ka baqayaan inay isticmaalaya iPhone cusub? Waxa uu yimaado sida la yaab leh oo dhab ah, laakiin xaqiiqada dhabta sheegay, dhowr goobaha waxtar leh waa la 'waa in la ogaado "kuwa la isticmaalayo iPhone. Ma aha oo kaliya ay yihiin goobaha kuwaas oo lagama maarmaan in model laftiisa, laakiin waxa ay noqon doontaa tireysey qasaaraha ay sheegayaan in ay yihiin dadka isticmaala iPhone laakiin aan fikradda aasaasiga ah ee waxa ay jecel yihiin in ay bandhig!
• Ku darista entries jadwalka ku iPhone
Mashquul jadwalka A waa wax aan dhammaan la xidhiidhaan. Entries Tirsiga taariikhda waa in la cusboonaysiiyaa si aad ku dari kartaa entries shakhsi ahaaneed oo aan marnaba ka maqnaan doona on ballamaha muhiim ah ama loo qabto waxyaabaha.
• Doorashada ringtone ah
Iyada oo lagu ogaaaday ee ringtones in ku dhawaad ​​dhamaan noocyada ay, Apple, hubaal users siinayaa fursad ay ku heli ringtone ah watana in kulan ka mid ah ayaa shakhsiyadda iyo doorashada. Baro sida kuwaaga u soo qaado.
• howlan telefoonka kula PC
Tani waa cakewalk ah ugu naga mid ah oo yaqaana sida loo soo dheegato ugu fiican ee music ka desktops iyo laptops our. Waxaa intaa dheer, haddii aad ahayd user iPod ah, ma noqon adag doono oo dhan.
• NAAFADA KU Ad Socodka
Ayado lagu jiro meesha arbushin ilaa xayeysiis u noqday wax caadi ah, waa in ka badan loo baahan yahay si loo soo dajiyo feature ka hortagga xayeysiiya basaasayeen hawlaha aad. In kastoo ay tahay lagma optional dad badan waxay jecel yihiin in ay helaan macluumaad ku saabsan xayeysiis sidan, laakiin gargaar ah oo loogu talagalay dadweynaha gaarka ah-miyir qabo.
• saacad Change auto qufulka
Waa maxay sababta aad shaashadda ku shaqeeya on marka loo baahneyn waa dheecaan aad batteriga? Maaweelin auto-qufulka Dejinta waxaa lagula talinayaa dhammaan dadka isticmaala iPhone. Dajinayso waqti bareeg ah in ay dami shaashadda telefoonka smart ee, batariga waa la badbaadiyey.
• Ku rakib 'Raadi aan iPhone'
A nolosha-baado ee app ah oo kaa caawin kara soo kabsado telefoonka ee jiffy ah, tani waa feature ugu horeysay ee ay tahay in la soo bixi iyo tan ugu muhiimsan oo loo yaqaan oo dhan. Si fudud online tagaan si ay icloud.com goobta oo ay ka heli khariiradda ah 'wax kaqabashada fudud'.
Waxaa jira abaar lahayn fursado waxbarasho oo marka la isticmaalayo iPhone ah. Si kastaba ha ahaatee, mar walba loo hubiyo in aad u xaliyo dhibka kasta oo halkan baxdo.
2 Siyaabaha dar Photos si iPhone iyo Talooyin Helo Space dheeraad ah iPhone
> Resource > iPhone > Iphone Dejinta Dhibaatooyinka waxaad u baahan tahay in aad ogaato sida uu u xaliyo